यी एक नायक नभैदिएको भए यी नायिका सायद अलपत्र हुन्थे ! – Jagaran Nepal
यी एक नायक नभैदिएको भए यी नायिका सायद अलपत्र हुन्थे !
सलमान खान बलिउडका धेरै चल्तीका अभिनेता मानिने गर्छन्। उनि प्राय बलिउडमा हिट चलचित्र दिने भएका कारण धेरै प्रख्यात रहेका छन्। खानले नयाँ प्रतिभालाई सँधै सहयोग गर्न खासै पछि हट्दैनन्। धेरै नायीकाहरुलाई बलिउडमा टिकाउनको लाही उनकै हात रहने कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। जुन नायिका नियेरा उनले चलचित्रमा डेब्यु गराउने गर्छन्,प्राय नायिकाको बलिउड करियर स्थापित गरिन्छ। आज हामी यस्ता केहि नायिकाहरुको बारेमा चर्चा गर्ने छौं, जसलाई बलिउडमा टिकाउन सलमानको भूमिका रह्यो।
सलमान र क्याटरीनाको प्रेमका बारेमा नजान्ने कमै होलान्। कुनै समय धेरै मिल्ने यस जोडीलाई बलिउडमा अझै पनि देख्ने गरिन्छ। क्याटिनको क्यारियरमा सलमानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरालाई पनि कसैले नकार्न सक्दैन। यस तथ्यलाई कैटरीनाले समेत स्वीकार्ने गरेकी छिन्। “बूम चलचित्रबाट बलिउड यात्रामा निस्किएकी कैटरीना सलमानसँग अभिनय गरेको चलचित्र “मैनें प्यार क्यों किया” मार्फत मात्रै चर्चामा आएको बताइने गरिन्छ।
२०१४मा डेजी शाहलाई सलमान खानसँग को चलचित्र “जय हो”बाट राम्रो ब्रेक मिलेको थियो। यस भन्दा पहिला कुनै पनि खास चलचित्र हात नलागेको अवस्थामा यस अवसर वरदान सावित भयो। सलमानसँगचलचित्रमा देखा पर्नु भन्दा पहिला उनि पृष्ठभूमि नर्तकको भूमिकामा काम गर्ने गरेकी थीइन्।
स्नेहा उलाललाई ऎश्वर्यासँग तुलना गर्ने गरिन्छ। दक्षिण भारतीय चलचित्रमा ज्यादा प्रसिद्ध यी नायिकालाई बलिउडमा भने सलमान खानसँग अभिनय गर्ने मौका मिलेको थियो। यी नायिकाले सलमानसँग चलचित्र “लकी : नो टाइम फर लव”बाट बलिउडमा पाइला टेकेकी हुन्।
सोमी अलीलाई सलमानको पुर्व प्रेमिकाको रुपमा समेत चिन्ने गरिन्छ। पाकिस्तानी अभिनेत्रीले ९० को दशकमा सलमानसँग चलचित्र “अन्त” बाट डेब्यु गरेकी हुन्। तर यी दुइको सम्बन्ध भने खासै टिक्न सकेन।
सोनाक्षी सिन्हा सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हाकी छोरि रहेको कुरा सबैलाई थाहानै छ। तर बलिउडमा भने उनलाई सलमानबाट ब्रेक बिलेको थियो। उनले बलिउडमा चलचित्र “दबंग”मा सलमानसंग अभिनय गरेसँगै उनको चर्चा एकाएक चुलिएको बताइने गरिन्छ। बलिउडमा अहिले राम्रै चल्तीकी नायिका मानिने सोनाक्षी सलमानलाई सच्चा नायक मान्ने गर्छिन्।
जरीन खान कैटरीनाकि बहिनि हुन्। कैटरीनासँगको सम्बन्ध टुटे पनि सलमानले कैटरीनाकी बहिनीलाई बलिउडमा डेब्यु गराएका थिए। सलमानले जरिनललाई “वीर” चलचित्र मार्फत मौका दिएका थिए। सलमानसँगको बलिउड प्रवेश पछि उनले विभिन्न चलचित्रहरुमा काम गर्ने मौका समेत पाएकी थीइन्।
भूमिका चावलालाई मचिन्ने त कमै होलान्। यी अभिनेत्री सलमानसँग चलचित्र “तेरे नाम” बाट बलिउडमा पाइला राखेकी थिइन्। यी नायिकालाई चिन्ने प्रायले यस चलचित्रमा काम गरेको कारणनै चिन्ने गर्छन्। अन्य चलचित्रमा देखा परे पनि यी नायिकाले खासै चर्चा बटुल्न भने सकिनन्।
सलमान खान र जैकलीन एकैसाथ पहिलो पटक चलचित्र “किक”मा देखा परेका थिए। पहिला पनि धेरै चलचित्रमा काम गरिसकेकी यी नायिका सलमानसंगको चलचित्र पछि भने बलिउडमा राम्रै छाप छोड्न सफल भएकी थिइन्। जैकलीनले धेरै अन्तर्वार्ताहरुमा सलमानको धेरौ तारिफ समेत गर्ने गरेकी छिन्।
यी नायिका वाहेक सलमान अहिले बिग बोसमा खासै टिक्न नसकेकी मोडल नताशालाई बलिउडमा स्थापित गर्ने कार्यमा जुटेको बताउने गरिन्छ।
पूलमा ब्रेकफास्ट गर्दै गरेको काजलको यो तस्वीर भईरहेको छ सोशल मिडियामा भाइरल
अमिर खानकी छोरी इरा प्रेममा, यि हुन् उनका प्रेमी
बलिउड अभिनेत्री श्वेता तिवारी विरुद्ध ठगीको मु’द्दा
कुमार सानुले छोरालाई भने, ‘त्यती धेरै घमण्ड छ भने आफ्नो नामको पछाडी मेरो नाम हटाउ, आमाकै नाम राख ‘